प्रहरीबाट जर्ज फ्लोयड मारिएपछि अशान्त अमेरिका, कहाँ के भयो ? « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas KHASOKHAS E-MAGAZINE
प्रहरीबाट मिनापोलिसमा अश्वेत अमेरिकन मारिएको घटनाको एकसाता भएको छ त्यसपछिका ६ दिन अमेरिकामा निकै अशान्त भएका छन् । गत सोमबार राती एउटा ग्रोसरी स्टोरमा पुगेका जर्ज फ्लोयडले स्टोरमा २० डलरको नक्कली नोट दिएको आरोपमा स्टोरले प्रहरी बोलाएपछि पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले घाँटी न्याकेपछि उनको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसयताको ६ दिन अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा निकै हिंश्रक प्रदर्शनहरु भएका छन् । कतिपय प्रदर्शनहरु शान्तिपूर्ण छन् भने कतिपय अत्यन्तै हिंश्रक बनेका छन्, जसमा प्रहरी र सर्वसाधारणबीच मुठभेडका घटनाहरु समेत भएका छन् ।
Protest over the death of George Floyd in Washington DC. (Part 1) Video : Anil Adhikari #GeorgeFloyd pic.twitter.com/hz25RpWYo0
— Khasokhas (@Khasokhas) June 1, 2020
सप्ताहन्तभर अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा अत्यन्तै नराम्रा दृश्यहरु देखिए । न्युयोर्कमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरु भएतिर गाडी जोतेको भिडियो यतिबेला भाइरल भइरहेको छ । त्यस्तै मिनेसोटामा एउटा व्यक्तिले ट्यांकर ट्रक प्रदर्शनकारीहरुको भींडतिर जोतेको थियो, उक्त व्यक्तिलाई आक्रमणको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ ।
विभिन्न स्थानमा पत्रकारहरुमाथि समाचार संकलनका क्रममा अवरोध र आक्रमण भएको छ । प्रदर्शनको समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारहरु पक्राउ समेत परेका छन् । कैयन सिटीमा भवनहरु र ब्यापारहरुमा लुटपाट र आगजनी समेत गरिएको छ ।
बोस्टनमा कम्तीमा ७ जना प्रहरी अधिकारीहरु घाइते भएका छन् भने डेट्रोइटमा प्रदर्शनका क्रममा एकजना २१ बर्षको व्यक्तिमाथि गोली प्रहार भएको छ । ती व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यद्यपी ती व्यक्ति प्रदर्शनमा सहभागी थिए वा थिएनन् भन्नेबारे प्रहरीले पुष्टी गरेको छैन ।
ह्वाइट हाउस अगाडि भएको प्रदर्शनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई केहीबेर बंकरभित्र लगिएको थियो । उनका साथमा परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई पनि ह्वाइटहाउसमा बंकरमा लगिएको जनाइएको छ ।
Protest over the death of George Floyd in Washington DC. (Part 2) Video : Anil Adhikari #GeorgeFloyd pic.twitter.com/8g2mLCQCl2
अमेरिका अशान्त बनेपछि कम्तीमा ४० वटा सिटीहरुमा कर्फयु आदेश जारी गरिएको छ । वासिंटन डिसी र १५ राज्यहरुमा सेना परिचालन गरिएको छ भने मंगलबार यता भएका प्रदर्शनहरुमा अमेरिकाभर कम्तीमा ४ हजार पक्राउ परेका छन् ।
यसैबीच फ्लोयडको घाँटीमा घुँडा धँसेका निलम्बित प्रहरी अधिकारीलाई तेश्रो डिग्री हत्या र दोश्रो डिग्री नरसंहारको मुद्दा लगाइएको छ । प्रहरी अधिकारी डेरेक चाउभिनलाई आगामी जुन ८ मा अदालतमा उपस्थीत गराइने भएको छ ।